प्रेमीकाको निर्मम हत्या गर्नेलाई जीवित रहेसम्म जेल सजायको फैसला
बिराटनगर । प्रेमीकाको हत्या गर्ने विराटनगर १० का ३० बर्षीय दिनेश भट्टराईलाई अदालतले जिवित रहेसम्मकालागि जन्मकैदको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायधिस नारायण प्रसाद शर्माको एकल इजलासले पीडित परिवारलाई एक लाख रुपैया
6389 पटक पढिएको
छापा मारेर प्रहरीले पक्राउ गर्याे ७ याैनकर्मी
झापा । यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुई होटल सञ्चालकसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । बुधबार राति विर्तामोडस्थित नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा सञ्चालित न्यूनलाइट होटलका सञ्चालकसहित सात जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका
प्रकाशित मितिः जेठ 16, 2076
वीरगञ्जमा बालक अपहरणपछि हत्या, अभियुक्त भाग्न खोज्दा गोली प्रहार
जेठ १५, २०७६&ndash; बालक अपहरणपछि हत्या घटनामा पक्राउ परेका अभियुक्त भाग्न खोजेपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको टोलीले मंगलवार राति गोली चलाएको छ । वीरगञ्जमा जेठ १० गते शुक्रवार भएको बच्चा अपहरण घटनाका अभियुक्त भाग्न खोजेपछि �
इटहरी हस्पिटल चाेकबाट लागूऔषध सहित एक पक्राउ
सुनसरी&nbsp; । सुनसरीको ईटहरी उप-महानगरपालिका-९ हस्पिटल चोकबाट प्रहरीले लागूऔषध सहित सोमवार १ जनालाई पक्राउ गरेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरो विराटनगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लागूऔषध सहित सोही नगरपालिका बस्ने बर्ष २८ को सुरज स�
त्रास फैलाउँदै प्रतिबन्धित विप्लब समूह, इटहरी आसपास धेरै ठाउँमा भेटियो बम !
इटहरी . सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लबलाई प्रतिबन्द गरे सगै विप्लबले विभिन्न ठाउमा आतंककारी गतिविधी गर्दै आइरहेको छ । विप्लब समुहका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सरकारले पक्राउ गर्न थाले पछि झन झन विप्लब समुहले आफ्नो गतिवि�
प्रकाशित मितिः जेठ 13, 2076
इटहरी । इटहरी धरान सडक खण्डअन्र्तगतको सडकमा बम भेटिएको छ । आज विहानैबाट गस्तीमा खटिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले विहान करीब ६ बजेको समयमा संकास्पद बस्तु भेटेपछि नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीलाई खबर गरेको थियो । दुईवटा प�
9333 पटक पढिएको
उपत्यकामा बमैै बम: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो
काठमाडौं- आइतबार काठमाडौंमा बम विष्फोटमा परेर ४ जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानीको सुकेधारा र अनामनगरमा बम विस्फोट हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको हो । काठमाडौंकै नागढुंगा,चन्द्रागिरी, ललितपुरको लगनखेल बसपार्क, ग्वार्को लगायतका स्थान
बित्तिय संस्थाका कर्मचारी माथी धरानमा दिउँसै गाेली प्रहार
धरान:&nbsp;धरान उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ स्थित साउनेटारमा एक बित्तिय संस्थाका कर्मचारी शम्भु गच्छदार माथी गाेली प्रहार भएकाे छ । जीवन विकास संस्था नामक वित्तिय संस्थाकाे समुहकाे बैठक सकेर फर्कने क्रममा उनीमाथी गाेली प्रहार भएका
धरानमा गाेली प्रहार गरी दिउँसै ४ लाख रकम लुटियाे
धरान:&nbsp;धरान उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ स्थित साउनेटारमा एक बित्तिय संस्थाका कर्मचारीमाथी गाेली प्रहार भएकाे छ । माेटरसाइकलमा सवारले गाेली प्रहार गरी जीवन विकास संस्था नामक वित्तिय संस्थाका कर्मचारी शम्भु गच्छदारलाइ घाइते बन�
प्रहरीलाई पैसा गन्न मात्रै ३ घण्टा बढी लाग्याे
नक्कली नोटको कारोबारमा कैद भुक्तान गरी छुटेको एक वर्षलगत्तै युनिस अन्सारी उस्तै घटनामा फेरि पक्राउ परेका छन् ।शुक्रबार कतारको राजधानी दोहाबाट कतार एयरवेजको क्यूआर ६४४ कल साइन विमानमा आएका तीन पाकिस्तानीले सुटकेसमा ल्याएक�
प्रकाशित मितिः जेठ 11, 2076
ददर्नाक त्यो हत्याकाण्ड सुन्दै शरिर काप्छ
एक जना मान्छे आयो नौ जना मान्छेलाई छपछप काट्यो अनि आफु पनि केही पर गएर भुन्डीएर म&yen;यो । यो कुनै नेपाली चलचीत्रको कहानी होइन । यो पााँचथरको मिक्लाजुङ गाँउपालीका ३ आरुबोटेको हत्या काण्डको प्ररम्भीक अनुसन्धान यहि हो ।सोमबार राति �
कानकाे जाली फुट्ने गरी हिर्काए शिक्षकले
दमक । शिक्षिकाको कुटाईबाट पाँच वर्षकी बालिका एस्तर राईको कानको जाली फुटेको छ । झापाको कमल गाउँपालिका ५ मा रहेको लिटल एन्जल बोडिङ स्कुलमा अध्ययनरत बालिकाको कानका जाली फुटेको हो । उनी कक्षा १ मा अध्ययनरत छन् ।सोमबार विद्यालय छुट
पाँचथर हत्याकाण्डः थप प्रमाण फेला पार्याे प्रहरीले
फिदिम (रासस) । प्रहरीले पाँचथरको मिक्लाजुङ गाँउपालिका&ndash;३ आरुबोटेमा सोमबार राति भएको सामूहिक हत्याको घटनाका थप प्रमाण फेला पारेको छ । उक्त घटनाका मुख्य अभियुक्त ठहर्याइएका सोही गाँउपालिका&ndash;७ लुमाङ्दिनका मानबहादुर माखिमको �
झाँक्री हत्या गर्ने २६ जनालाई कैद फैसला!
गङ्गाजमुना गाउँपालिका&ndash;२ लताबमा दुई झाँक्रीको हत्या गरेको आरोपमा धादिङ जिल्ला अदालतले २६ जनालाई कारागार सजाय सुनाएको छ। धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले बुधबार सो सजाय सुनाउँदै चार जना महिलालाई भन�
११ वर्षिया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरी फरार युवक पक्राउ!
पाँचथर हत्याकाण्डः धरानमा पोष्टमार्टमपछि परिवारले शव बुझे
धरान । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका&ndash;३ आरुबोटेमा मंगलबार ज्यान गुमाएका १० जनाको शव विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा बुधबार पोष्टमार्टम गरिएकोछ । बुधबार साँझ पोष्टमार्टम पश्चात परिवारजनले शव बुझेका छन् । �
पाँचथर हत्याकाण्डः स्तब्ध आरुबोटे बजार असामान्य, स्कुल खुल्न सकेनन्
धरान । दुई परिवारका ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना पछि अशान्त बनेको मिक्लाजोङ गाउँपालिका ३ अरुबोटे क्षेत्र अहिले सामान्य बन्न सकिरहेको छैन । त्यस क्षेत्रका बिद्यालय खुल्न सकेका छैनन भने सरकारी कार्यालयमा समेत काम हुन सकिरह�
वीर अस्पतालबाट फरार जबरजस्ती करणी आरोपित किशोर टोखाबाट पक्राउ!
काठमाडौं- मेडिकल जाँच गर्न लैजाँदा अस्पतालबाटै फरार भएका आरोपित किशोर काठमाडौंको टोखावाट पक्राउ परेका छन्। जबरजस्ती करणी आरोपमा पक्राउ परेका पदम श्रेष्ठलाई प्रहरीले बालाजुबाट नुवाकोटतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा टोखाबाट पक्�
लागुऔषध नेपाल ओसार्ने मोटरसाइकल सहित भारतीय नागरिक पक्राउ
धरान । जोगवनी भारतबाट लागुऔषध ल्याएर धरान लगायतका स्थानमा विक्रि गर्ने एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोमबार राती प्रहरीले चेकजाँच गर्ने क्रममा बिआर&ndash;५० एच ११०० नं. को एफजेड मोटरसाइकल सहित भारतको विहार सुपौल च�
सीताले भनिन्, ‘हामी सबै एकै ठाउँमा सुतिरहेका थियौ'
झापा । देश, विदेशलाई नै चकित पार्ने पाँचथर आरुबोटे घटनामा भागेर ज्यान बचाएकी १४ वर्षीया सीता खजुमले आक्रमणकारीले नराम्ररी कुटपिट गरे पनि विचलित नभइ आफूलाई सुरक्षित गरेकी छन् । अनुहार छोपेर आएका व्यक्तिले पहिला कुटपिट गर्दै आ�
4554 पटक पढिएको